Eksaody 39 - Ny Baiboly
Eksaody toko 39
Fanamian'ny mpisorona - Fankatoavan'i Moizy ny zavatra natao rehetra.
1Natao tamin'ny jaky volomparasy, sy jaky mangatrakatraka, ary lamba mena antitra ny fanamiana enti-manao ny fombam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, mbamin'ny fanamiana masina ho an'i Aarona, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
2Ny efoda dia natao tamin'ny volamena sy ny jaky volomparasy ary rongony madinika mihasina. 3Nofisahana ho takelany manify ny volamena, dia nohetezana ho kofehy, vao nafaho tamin'ny rongony madinika, tenona misoratsoratra. 4Nasiana sorony roa hanambatra azy, ka dia voakambana tamin'ny tendrony roa izy. 5Ny fehin-kibo tambonin'ny efoda famehezana azy dia iray aminy, mitovy tenona aminy, natao tamin'ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra ary rongony mihasina, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy. 6Namboarina ny vato berila nalatsaka tamin'ny randram-bolamena, ka nosokirina tamin'ireo toy ny fisokitra fanombohan-kase, ny anaran'ny zanak'Israely, 7dia natao teo ambonin'ny soroky ny efoda ireo, ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
8Dia natao ny saron-tratra ka vita ara-pahaizana, toy ny nanenomana ny efoda ihany, tamin'ny volamena, jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony mihasina. 9Efa-joro mitovy lafiny efatra izy, ary natao roa sosona ny saron-tratra, irain-jehy ny lavany, irain-jehy ny sakany, ary roa sosona izy. 10Vato efatra andalana no naravaka azy; ny andalana iray dia sardoana, topaza, emeraody, andalana voalohany io; 11andalana faharoa: eskarbokla, safira, diamondra; 12andalana fahatelo: opala, agaty, ametista; 13andalana fahefatra: krizolita, berila, jaspy. Samy voahodidina raozy kely volamena ireo vato ireo avy teo amin'izay nandatsahana azy. 14Nifanerana tamin'ny anaran'ny zanak'Israely ny isan'izy ireo, fa nisy roa ambin'ny folo, toraky ny anaran'ireo, voasikotra toy ny amin'ny fanombohan-kase izy, ka samy nisy anarana iray avy tamin'ny foko roa ambin'ny folo. 15Teo amin'ny saron-tratra dia nasiana rojo madinika, volamena madio, voarandrana toy ny tady. 16Ary nanao randram-bolamena roa sy masom-bolamena roa izy, ka ny masom-bola roa dia natao tamin'ny tendrony roa amin'ny saron-tratra. 17Natsofoka tamin'ny masom-bola roa ny tady volamena roa teo an-tendron'ny saron-tratra. 18Ary nofeheziny tamin'ny randram-bolamena roa ny tendrony roa amin'ny rojony roa dia napetraka teo amin'ny soroky ny efoda anoloana. 19Dia nanao masom-bolamena roa koa izy, napetrany eo an-tendrony roa ambany amin'ny saron-tratra eo amin'ny sisiny anatiny manolotra ny efoda. 20Ary nanao masom-bolamena roa koa izy, napetrany eo ambanin'ny sorony roa amin'ny efoda eo anoloany, akaikin'ny famatorana azy eo ambonin'ny fehin-kibon'ny efoda. 21Dia nafehiny tamin'ny ribà jaky volomparasy amin'ny masom-bolan'ny efoda ny masom-bolan'ny saron-tratra, mba ho eo ambonin'ny fehin-kibon'ny efoda ny saron-tratra, ary tsy ho afa-miala eo amin'ny efoda ny saron-tratra, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
22Jaky volomparasy avokoa no nanaovana ny akanjo lavan'ny efoda, asan-tànan'ny mpanenona. 23Ny vozony, teo afovoan'ny akanjo lavan'ny efoda, dia nataony toy ny an'ny akanjo fiarovan-tratra: nasiany sisiny vita tenona, manodidina io vozony io, mba tsy haharovitra azy. 24Ary ny moron-tongony nasiany apongabendanitra jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, ary rongony mihasina; 25nanao lakolosy kely, volamena madio izy, nampifanelanelaniny tamin'ny apongabendanitra teo amin'ny moron-tongotry ny akanjo lava manodidina, mifanelanelana amin'ny apogabendanitra: 26lakolosy kely iray dia apongabendanitra iray, lakolosy kely iray dia apongabendanitra iray, amin'ny moron-tongotry ny akanjo lava manodidina, mba hanaovana ny fanompoam-pivavahana, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
27Akanjo anaty rongony, asan-tànan'ny mpanenona, no natao ho an'i Aarona sy ireo zanany; 28ary hamama rongony sy mitra rongony ho fihaingoany, kalisaona fotsy rongony mihasina, 29ary fehin-kibo rongony mihasina, natao tamin'ny jaky volomparasy, jaky mangatrakatraka, lamba mena antitra, tenon-damasy, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
30Volamena madio no nanaovana ilay takelaka natao diadema masina, dia nosokirina teo, toy ny fisikotra fanombohan-kase, ny hoe: Fahamasinana ho an'ny Tompo. 31Ribà jaky volomparasy no namehezana azy hametrahana azy amin'ny hamama avy ao ambony, araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy.
32Dia vita ny zavatra rehetra momba ny Fonenana, ny trano lay fihaonana; sady tanteraky ny zanak'Israely araka ny nandidian'ny Tompo an'i Moizy avokoa. Izany no nataony.
33Natolotra an'i Moizy ny Fonenana, ny trano lay mbamin'ny fanaka rehetra momba azy, ny jaigrafiny, ny hazo fisany, ny barany; ny andriny, ny faladiany; 34ny firakotra hoditr'ondralahy misoka mena, ny firakotra hodi-dogaona, ny efitra lamba fisarahana; 35ny fiaran'ny vavolombelona mbamin'ny baony sy ny fanaovam-panavotana; 36ny latabatra sy ny fanaka momba azy, mbamin'ny mofo alahatra; 37ny fanaovan-jiro volamena madio mbamin'ny lalampiny, dia ny lalampy halahatra eo aminy, ary ny fanaka rehetra momba azy, sy ny diloilo hatao amin'ny jiro; 38ny otely volamena, ny diloilo fanosorana, ny zava-manitra fanembohana, mbamin'ny varavarana lamba fidirana amin'ny trano lay; 39ny otely varahina, ny karakarany varahina, ny baony ary ny fanaka rehetra momba azy, ny tavy amam-paladiany; ny fefy lamban'ny kianja, mbamin'ny andriny amam-paladiany, 40ny vavahady lamba fidirana amin'ny kianja, ny kofehiny, ny tsimany, ary ny fanaka rehetra hoenti-manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny Fonenana, amin'ny trano lay fihaonana, 41ny fanamiana enti-manao ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina, ny fanamiana masina ho an'i Aarona mpisorona, sy ny fanamian'ireo zanany, fitondrany amin'ny raharaham-pisoronana.
42Vitan'ny zanak'Israely izany asa rehetra izany, araka izay rehetra nandidian'ny Tompo an'i Moizy. 43Nodinihin'i Moizy ny zava-nataony rehetra, ka hitany fa tanterany tokoa, vitany araka ny nandidian'ny Tompo. Ka dia nitso-drano azy ireo Moizy. >